डा. केसी काठमाडौं आउन तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राजधानीमा डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन (भिडियो)
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणात हुने बताइएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेर स्वास्थ्यकर्मी माइतीघ मण्डलामा भेला भएका थिए । राजधानीका धेरैजसो ठूला सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ १३:०५